दुई जलविद्युत् आयोजनाको लागि ९७ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृति
राजनीतिक आन्दोलनमा महिला : नालापानी युद्धदेखि गणतन्त्रसम्म नालापानीमा पुरुष सिपाही सँगसँगै लडाइँ लड्ने महिला हुन् वा राणा शासकविरुद्ध क्रियाशील दिव्या कोइराला, राममाया पोडे, रेवन्तकुमारी आचार्य र मंगलादेवीहरू, अथवा २०६३ सालमा सडकमा आएकी छायाँदेवी पराजुली, हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा महिला सँगैसँगै सहभागी छन्। तर, परिवर्तनपछि भने पुरुष चिन्तन हाबी हुने गरेको छ।
प्रिय पाठक, हामीमाथिका अन्यायबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ? अनेक अत्याचार सहेर बाँचेकाहरुसँग थोरै भए पनि समानुभूति कहिले बाँड्नुहुन्छ? असहज कथाहरू सुन्न आफ्नो सहज स्थानबाट कहिल्यै निस्कनुहुन्छ?
‘समृद्ध नेपाल’ यात्रामा कहाँ छन् दलित महिला ? समाजमा विद्यमान असमान व्यवहारविरुद्ध होस् या शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलन, सबैमा दलित महिलाको सहभागिता मह‍त्त्वपूर्ण छ। तर, आन्दोलनपछि दलित महिलाको भूमिका सधैँ लुप्त र सतहमुनि मात्र पारिएको छ।
कसरी बढाउने नेतृत्वमा महिला सहभागिता ? मुलुकको नीति निर्माण र निर्णय गर्ने तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा बढेको छ। तर, अपेक्षा गरे अनुसार संख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता बढाउन अझै चुनौती नै छ।